Fankalazana ny Dihin'ny Varika Maneran-tany 2018-Famintinana - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Fankalazana ny Dihin’ny Varika Maneran-tany 2018-Famintinana
Ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany dia hetsika maromaro izay tanterahina maneran-tany mihitsy mandritra ny volana Oktobra sy Novambra mba ho fanentanana lehibe amin’ny fiarovana ireo varika, fankalazana ny maha biby tokana azy eto Madagasikara ary ny fanehoana ny maha zava-dehibe ny fiarovana ny varika sy ireo fonenany.
Andiany fahadimy amin’ny fankalazana ny taona 2018. Ary fikambanana miaro sy tia ireo varika aty Madagasikara, any Etazonia , any Europa hatrany Japon no nankalaza ny dihin’ny varika maneran-tany.
Maro tamin’ireo mpikambana ato amin’ny LCN no nankalaza sy nanohana ny hetsika. Tao ny GERP, Madagascar Biodiversity Partnership, Conservation Fusion, Madagascar Fauna and Flora Group, Lemur Love, Lemur Conservation Foundation, Duke Lemur Center, Oxford Brookes University ary ireo Zoos maro maneran-tany.
Ndeha ary fintinina manaraka ireo hetsika maromaro nandritra ny Fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany teto Madagasikara sy tany amin’ireo firenena hafa!
Nankalazaina tamin’ny zoma faha 05 oktobra 2018 lasa teo, teto Antananarivo ny dihin’ny varika maneran-tany, andiany fahadimy, izay nokarakarain’ny GERP. Maro ireo hetsika izay notanterahina. Nanomboka tamin’ny diam-be niarahana tamin’ireo vondrona tanora avy amin’ny sekoly ambaratonga ambony, ireo orinasa ary ireo fikambanana. Ary, nitohy tamin’ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny ANS Ampefiloha, ireo fanentanana maro izay notanterahin’ireo mpahay ara-java kanto ary ireo fampirantina. Nisy ihany koa ny laombary an-dasy narahina ady hevitra mitondra ny lohahevitra hoe « Harem-pirenena ny varika fa mbola ho voaaro ve? » natao tao amin’ny ENS Ampefiloha.
Araho eto ny resa-dresaka nifanaovan’i Dr Corduant, mpandrindra ny LCN eto Madagasikara tamin’ny mpandrindra ny hetsika Andriamatoa Heritiana Dieu Donné RANDRIANATOANDRO momba io fankalazana io.
Vakio eto ny bilaogy mikasika io.
Nankalazaina tamin’ny 28 Septambra lasa teo ny Festival des Indri, izay nokarakarain’i GERP. Olona mahery 150 no tonga nanatrika izany fankalazana izany. Nisy ny diam-be izay nahita ny fandraisan’anjara ireo mponina eny ifotony (ireo guides, polisin’ala, fikambanam-behivavy, mpamboly zana-kazo, gardien guérite, ireo mpikambana ao anatin’ny fikambanan’ireo mpitantana na ny plate-forme de gestion). Nisy ihany koa ireo hetsika maro samihafa toy ireo fampirantiana, dihy vakodrazana ary laombary an-dasy.
Isan-taona dia mandray anjara amin’ny fankalazana ny Dihin’ny Varika Maneran-tany ny, Madagascar Fauna and Flora group . Tamin’izao andiany fahadimy izao dia nokarakaraina niaraka tamin’ny Varecia club niarahana niasa tamin’ny Alliance Française ao Toamasina, ISSEDD ary ny LEO CLUB ao Toamasina ny hetsika.Novatsian’i Ministeran’ny Tontolo iainana, ny Ekolojia ary ny Ala izany fankalazana izany.
Ny tanjona amin’izany hetsika izany dia mitovy amin’izay tanjona apetraka izan-tana ihany :
Hampihenana ireo tsindry sy loza mihatra amin’ireo varika,
Hanaitra sy hahatonga saina ny olona amin’ny lanjan’ireo varika,
Hampandray andraikitra misimisy kokoa ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny,
Hanentana ireo ankizy eny an-tsekoly sy ireo mpianatra any amin’ny ambaratonga ambony,
Hanentana ireo sarambambem-bahaoka.
Nandritra ity andiany fahadimy ity, indroa mihataona ny fankalazana, niainga ho an’ny vahaoka ao Toamasina, hetsika izay natao teo amin’ny toerana malalaka, Araben’ny fahaleovan-tena, ny faha 10 sy faha 11 Novambra ary ny hetsika iray hafa tao Ivoloina Parka ny faha 17 Novambra lasa teo.
Nahatratra 800 ireo olona tonga teo amin’ny Araben’ny fahaleovan-tena ny andro voalohany ary maherin’ny 1400 ny andro faharoa. Fa nisy ihany koa ireo fampirantiana marobe izay nanasongadinana ireo varika hita any Madagasikara ary indrindra fa ireo izay hita ao Ivoloina. Naseho nandritra izany y maha-zava-dehibe ny varika, ireo loza mihatra aminy ary ireo zavatra afaka atao’ny tsirairay amin’ny fiarovana azy ireo. Nisy ireo hetsika marobe sy lalao nampiarahina tamin’io hetsika io.
Varavarana misokatra tao amin’ny Parka Ivoloina
Anisan’ny tena nanamarika ny andiany fahadimy, ny fanomezana fijerena malalaka ny Parka Ivoloina. Nanomboka tam’iny dia-tongotra 12 km tao anaty Parka ny fotoana. 175 ireo olona nandray anjara tamin’izany anisan’izany ireo skoto, mpianatra eny sekoly Frantsay, club Vintsy, mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony, ray aman-dreny ary ireo mpihira vakodrazana, sns.
Nasaina manoka ihany koa ireo manam-pahefana nandritra ny hetsika ary ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy. Ny fandraisana anjaran’ireo Leo Club tao Toamasina ihany koa no nanamarika ny fotoana ka nisy noho izany ny fitiliana Diabeta tao Ivoloina ihany. Amin’ny akapobeny, mahery ny 1500 people ny olona tonga ary araka ny fanao, maro ireo kilalao sy fifaninana nahazoan’ireo ankizy loka marobe.
Notanterahina ny faha 21 sy faha 22 Novambra lasa teo ny andiany fahadimy amin’ny Festival Bandro izay nokarakarain’ny Madagascar Wildlife Conservation (MWC) . Nahomby ny hetsika satria dia olona mahery ny 500 no voaentana nandritra ny 2 andr0. Ny andro voalohany dia nisy ny fitsidihana ny Parka Bandro ao Andreba Gara ary ny voly zetra sy fametahana panneau de signalisation Parc Bandro. Ny hariva dia nisy ny lalao fanantanjahan-tena ary ny fijerena horonan-tsary momba ny Bandro. Ny andro faharoa dia nisy ny diam-be izay narahina kabary, fampisehoana dihy mirindra sy vakodrazana ary fizarana loka.
Ny fankalazana dia niarahana t@ DREEF Alaotra Mangoro, Région Alaotra Mangoro ary ny Préfécture d’Ambatondrazaka sy ireo mpitantsoroka toy ny Durell, Alaotra Ranosoa, GERP, Tao ihany ireo CTD tao anatin’ny komity mpikarakara rehetra tsy adino ihany koa ireo haino amanjerim-panjakana sy tsy miankina niara-niasa. Ny mpanohana ny hetsika dia Margot Marsh Biodiversity Foundation sy Coopération Décentralisée/Departement Ille et Vilaine.
Niara-nankalazana ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany ny Conservation Fusion niara-niasa tamin’ny Madagascar Biodiversity Partnership, ny mponina eny Kianjavato ary ireo VOI (Vondron`Olona Ifotony), ireo mpianatra miara-miasa any Kianjavato ary ireo mpianatra 25 avy amin’ny Onversiten’Antananarivo izay mitsidika ny toerana any Kianjavato. Naharitra roa andro ny fankalazana ny faha 26 ary ny faha 27 okotbra lasa teo. Tamin’ity taona ity, dia niompana bebe kokoa tamin’ireo mponina eny ifotony ny fankazalana ka maherin’ny 1100 ny olona eny ifotony no voaentana ao anatin’izany ireo lohan-dohan’ny mpisorona any an-toerana, ny filoha vaovao VOI, ireo mpampianatra, ireo reny ary ireo fikambanam-behivavy.
Telo ireo hetsika lehibe natao :
Fambolen-kazo : Niarahana tamin’ny MBP sy Conservation Fusion, 18200 ireo zana-kazo nambolena.
Toby ho fiarovana : Ny zoma faha 26 Oktobra dia nanantanteraka ilay toby ho fiarovana niaraka tamin’ny mpianatra miisa 22 ary mpampianatra 2 avy amin’ny EPP Ambodibonary ary ireo guides 4 avy amin’ny Madagascar Biodiversity Partnership.
Conservation Camp na ny toby ho fiarovana dia anisan’ny tetikasam-panabeazana lehibe izay notarihina nandritra ny efa-taona ary avy eo dia nafindra tamin’ireo mpitarika eny ifotony ny fitantanana sy ny fandrindrana azy io fa misy ny fiaraha-miasa amin’ny Conservation Fusion ary manjary fandaharan’asa mitohy ao Kianjavato io Conservation Camp io.
Fa nikarakara conservation camp manokana izy ireo nandritra ny WLD ary ny lohahevitra tamin’io dia ny hampifandray ny ankizy amin’ny gidro ka mba hampitarika azy hifandray bebe kokoa amin’ireo mpanoro-dia na guides ami’ny resaka fananana ala sy ireo gidro. Fa fifandraisana ahafahan’izy ireo manovo fahalalana miaksaika ny natiora misy azy ary ahazoany ny maha-zava dehibe ny tombony lehibe ananany amin’ny fahitana gidro any anaty ala ary koa mba hianarana ny fomba fiainan’ireo gidro ireo. Amin’ny maha andro manokana azy, dia nahzo boky fanentanana momba ny gidro ireo ankizy.
Ireo gidro atao hoe Tsiory sy Varijatsy dia manana tantara izay tena miainga avy amin’ny zava-misy ao Kianjavato ary nampiasaina ao amin’ireo sekoly miara-miasa mba ho fanabeazana ireo ankizy momba ny gidro. Ahaona no ahafahana mampifandray ireo gidro-olona-tontolo iainana ary ahaona no ianarana mikasika ny anjara asan’ireo gidro ao anaty ny ala misy azy.
Nahita ireo gidro toy ireo varijatsy ny ankizy fa tsy nahita kosa ireo Kotrika satria fotoanan’ny fiterahany ary lasa lavitra izy ieo mitady ny sakafony.
Taorian’ny fitsidihana sy fandehanana anaty ala dia nisy ny fifanakalozan-kevitra teo amin’ireo samy mpandray anjara tamin’ny Conservation Camp ary ireo mpitari-dia. Ireo guides na mpitari-dia ireo dia nanazava ny asa amin’ny maha guides azy , ny asany ao anaty ala sy ireo asa amin’ ny gidro (fanaraha-maso ny sakafon’ny biby isan’andro ohatra) ary dia nitombo fahalalalana momba ny tombon-tsoa hisian’ny gidro ao anaty ala, araka izany ireo mpandray anjara.
Ankoatran’izay, nanana tombony manokana ireo mpandray anjara nandritra io fotoana io satria dia niara-nizara hafaliana tamin’ny fitsidihana ala izay anisan’ny fotoana mamy ankafizin’ ny ankamaroan’ny ankizy indrindra ary ao anatin’izany dia tena tian’ny ankizy ihany ny mahita ireo varika/gidro, ny miara-mijery ny natiora miaraka amin’ny namany ary ny mametraka ireo fanontaniana amin’ireo guides ka ahazoany fahalalana marobe.
Ny diam-be dia notarihin’ireo ray aman-dreny mpitarika avy aminin’ireo tanàna ao izay tonga nanatrika ny hetsika tao Ambolotara. Nahafahana nanentana ny tanàna iray manontolo izany fa indrindra ihany nahafahana nampivondrona ny olona rehetra aorian’ny diam-be.
Ny hira nampiasaina nanentana dia mifono ny lohahevitra hoe “Arovantsika ny varika fa io no lovantsika. Ndeha hiaraka isika hiaro ny varika, androany ndeha hankalazaintsika ny varika ».
Samy nanao saro-tava varika avokoa ny ankizy. Saro-tava izay namboarian’ireo mpiasa an-tsitrapo amerikanina
Ankizy maherin’ny 144 avy amin’ireo sekoly mpiara-miasa no tonga nandritra ny fankalazana. Tamin’ity taona ity, noho ny fiaraha-miasa maharitra niaraka tamin’ireo sekoly dia samy nanana « mascotte » varika avokoa ny sekoly tsirairay.
Fanentanana ireo mponina sy kilalao fanontaniana
Taorian’ny diam-be, nivory teo an-tokotanin’ny sekoly ao Ambolotara ny mponina voavory. Teo no nisokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fankalazana ny dihin’ny varika, izay nosokafan’ny Ampanjaka ka nisaraona manokana ny Conservation Fusion sy ny MBP tamin’ny nifidianany ny toerana Ambolotara amin’ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany, ary teo ihany koa no nampatsiahiviny ny mponina ny mba tsy hanaovana ny tavy intsony satria efa hita taratra tsara izao ny tombon-tsoa azo avy amin’ny fiarovana ny fonenan’ireo gidro.
Mpianatra 25 avy ao amin’ny Oniversiten’Antananarivo no tonga nanampy an’ny CF sy MBP tamin’ny fikarakarana ny WLD ary dia nanao dihy mirindra izy ireo nandritra ny hetsika.
Ny fankalazana toy izao mantsy dia andro lehibe ahafahana manentana manokana ny mponina eny ifotony mikasika ny tavy, strai hatreto dia mbola avo ny tahan’ny fanaovana tavy ao Ambolotara. Mandritra ny fotoana ivoriana tahaka izao, dia mandray fitenenana hatrany i Marc, mpamboly zana-kazo mikasika ny fiantraikan’ny tavy eo amin’ny gidro sy ny fiainan’ny olona andavan’andro mihitsy.
Nankalazaina tao Andapa ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany ny faha 31 Oktobra 2018 lasa teo. Olona maherin’ny 300 no tonga nanatrika ny fotoana ary dia nahitana fahombiazana hatrany ny hetsika. Nanomboka tamin’ny diam-be ny hetsika izay nahitana ny fandraisana anjaran’ireo olona marobe (mpianatra, fikambanam-behivavy miaro ny ala ary ny maro hafa). samy nanao saro-tava varika ny mpandray anjara.
Ny Lemur Conservation Foundation (LCF), Duke Lemur Center-SAVA Conservation, World Wildlife Fund (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS) ary ny maro hafa dia samy andray anajra tami’ny fikarakarana ny hetsika ary nisy ihany koa ny fankalazana niarahana tamin’ireo mpianatra tao Andapa. Maro ireo hetsika notanterahina ao anatin’izany ny fifaninana dihy, fifaninana tantara kely mikasika ny varika ary avy eo dia nijery horonan-tsary mikasika ny varika izay novokarin’ny BBC film mitondra ny lohateny hoe “Nosy Mahagaga”.
Nisy ny fanalana hetaheta sy ireo loka maro nozaraina toy ny penina, kahie hoa ‘ny ankizy. Tamin’ity taona ity, dia nanao hetsika manokana ny LCF ka nanome fatana mitsitsy ADES izay tena maro mangataka tokoa.
Ny mpamatsy vola dia ny LCF, ny MNP ary ny WWF ary ireo fikambanana ifotony maro.
Ny andro Zoma tokony hankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany dia nanorana ny andro tany sainte Luce ka tsy afaka nankalaza izany ny SEED Madagascar. Saingy andro vitsy taorian’izay dia nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny tetikasa Ala izy ireo.
Ny tetikasa Ala dia tetikasa lava famerenana ala izay hanana tanjona ny mba hifandraisan’ireo ala izay potika. Izany no atao dia ny mba ahazoan’ny karazana girdro 3 mivoka amin’ny alina, mivezivezy amin’ireo ala ireo ary dia hampitombo be ny velaran-tany fonenany izany. Tamin’ny niandohan’ny volana Novambra, dia nanomboka tamin’ny fambolena Acacia ny tetikasa.
Ho hitanao ao amin’ny tranonkala an’i SEED Madagascar ny fomba hanampian’ny tetikasa hiaro ireo gidro ireo.
Hetsika tany Etazonia
Tamin’ity taona ity, dia sambany ho an’ny Lemur Love, Inc. no mankalaza ny dihin’ny varika maneran-tany amina toerana iray. Marihina fa misy hatrany ireo hetsika maro izay ataon’izy ireo ao amin’ny tranonkala sy ireo tambazotra sosialy ary fifaninana izay natao mandritra ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany efa telo taona izao.
YOLO Brewing Company any Sacramento, CA no toerana voalohany nanaovana ny fankalazana. Niara nifaly tamin’ireo mpiasa sy mpikarakara biby ao amin’ny zoo any Sacramento izy ireo ka niara-nitsotro ilay antsoiny hoe « Lemur Alone » Milkshake IPA beer.
Ny fankalazana faharoa nataon’i Lemur Love dia tany amin’ny foibe misy azy tany San Diego, CA tao North Park Beer Company. Izany dia niarahany tamin’ireo ireo mpiasa sy mpikarakara biby ao amin’ny zoo ary ireo namana izay tia varika ihany koa.
Ny hetsika ataonay amin’ny interneto dia nahitana fahombiazana hatrany. Maro ireo olona, anisan’ny ankizy izay nandefa ireo sarina gidro tsara indrindra nalainy ary nandefa ihany koa sary tanana tena tsara ary dia nozaraina tamin’ny tambazotra sosialy izany. Ary ny fifaninana momba ny gidro nataonay dia anisan’ny tena nalaza indrindra tamin’ity taona ity ary dia maro ny resaka nifandraisana nandritra izany.
Tamin’ny faha 13 oktobra 2018, Lemur Conservation Foundation nankalaza voalohany ny andro maneran-tany ho an’ny varika toy ireo hetsika maro misy amin’ny firenena hafa.
Nympiara-miombon’antoka aminy, ny « Ringling College of Art and Design », dia nandray maimaim-poana ny hetsika izay notanterihana tao amin’ny tranom-boky Alfred R. Goldstein. Maro ireo karazana hetsika fanabeazana natao ary nisy ihany koa ny famelambelaran-kevitra nataon’i Drs. Alison Grand sy Erik Patel tao amin’ny « The Art & Science » momba ny fomba hiarovana ny gidro. Nisy ihany koa ny fampirantiana ireo sary natao nadritra ny fifaninana ka olona 20 avy amin’ny Oniversite no nandray anjara tamin’izany.
Nisy ny fanangonam-bola hanaovana asa soa tany san Francisco ny andro maneran-tany ho an’ny varika tao amin’ny « The Riptide ». Ny vola rehetra azo dia nomena an’ny fikambanana AEECL ho an’ny tetikasa irahanay amin’ireo mponina eny ifotony amin’ny fiarovana ireo Akomba, gidro tena efa eo am-bavan’ny faharinganana.
Nankalaza ny andro maneran-tany ho an’ny varika ny Chester Zoo. Nisy ny famelambelran-kevitra natao momba ireo Maky na Maki tao amin’ny toerana atao hoe « Lemur island ». Afaka nitsidika ireo varika misy ao amin’ny zoo ny mpitsidika ny tolak’andro ka nianatra momba ireo varika ary ny zavatra takiana raha te-hiasa ho an’ny asa fiarovana any Madagasikara.
Ao amin’ny Trevor Zoo, dia efa nanana varika izy ireo nanomboka tamin’ny taona 1985. Nankalaza ny andro maneran-tany ho an’ny varika izy ny faha 27 sy faha 28 Oktobra 2018. Maro ireo hetsika notanterahina hanamarinana ny fankalazana ary mba hanentanana ny mpitsidika io andro io momba ny loza izay mihatra an’ireo varika ary ny momba an’ireo biby misy any Madagasikara. Nisy ny famelambelaran-kevitra nataon’ireo mpikarakara biby momba ny varijatsy sy ireo maky.
Nisy ihany koa ireo boky fanabeazana mikasika ny varika izay novaina’ireo ankizy. Ny antsasam-bidy azo avy amin’ireo zavatra vidin’ireo mpitsidika dia nomena ho fiarovana ireo varika sy ireo fonenany.
Nankalazaina tao amin’ny Kros Strain Brewing Company ny andro maneran-tany ho an’ny varika. Araka izany dia nivarotra asa-tanana malagasy maro izy ireo ho an’ny mpitsidika anisan’izany ireo tee-shirt, ireo akanjo miloko. Ny vola rehetra azo dia nomen’ny Conservation Fusion.
Nankalaza ny dihin’ny varika maneran-tany izy ireo. Afaka nitsidika ireo mpiasa mpikarakara ny biby sy ireo varika ny mpitsidika nandritra io andro io.
Afaka naka sary maro samihafa ireo mpitsidika niaraka tamin’ireo mascotte varika izy ireo. Any amin’ny trano fivarotana, dia afaka nividy ireo sary nataon’ireo varika izay namboariny ihany. Ny ampahany amin’ireo vola azo amin’ireo zavatra novidiana ireo dia nalefa ho an’ny mpiara-miasa amin’ny Madagascar Fauna and Flora Group.
Central Florida Zoo sy Botanical gardens
Tany Central Florida Zoo & Botanical Gardens nankalazaina ny asabotsy faha 3 Novambra, niaraka tamin’ireo karazana gidro ary ireo biby hafa hita any Madagasikara niaraka tamin’ny lohahevitra hoe « Eo akaikin’ny varika isika ». Nisy ny kilalao, hetsika maro samifaha ary hafatra momba ny fiarovana maro.
Nankalazaina ny Alahady faha 28 Oktobra ny andro maneran-tany ho any varika tao Staten Island zoo. Nisy ny famelambelaran-kevitra.
Nanatrika fiofanana kely mikasika ny varika ny mpitsidika ary nanambaotra ireo kilalao fanome ireo gidro any amin’ny Zoo.
Nankalazaina tany Charleston ihany koa ny andro maneran-tany ho an’ny varika. Nisy ny fanamboarana ireo kilalao maro samihafa, saro-tava, sary atao amin’ny tarehy ho an’ireo mpitsidika.
Tany am-pianarana ihany koa dia nankalaza ny andro maneran-tany ho an’ny varika niarahana tamin’ireo mpianatra sy mpampianatra toy i Ms. Christine Zelenka, izay mpampianatra Biolojy, izay nanomana zavatra maro ho an’ny mpianany ho amin’izany fankalazana izany.
Tena nahafinaritra ny fankalazana ny andro maneran-tany niaraka tamin’ireo mpianatro. Samy nanomana zavatra ho tantaraina momba ny gidro izy ireo!
Hetsika tany Eoropa
Nankalaza ny andro maneran-tany ireo mpiasa mpikarakara ireo Primates tamin’ny alalàn’ny fitsidihana ireo gidro. Nisy ireo lalao sy ireo fanamboarana kilalao ho an’ireo gidro.
Oniversite any Oxford Brookes
Ireo mpikaroka momba ny varika ao amin’ny Oxford Brookes University dia nankalaza ny andron’ny varika mba hanentanana ireo mpiara miasa aminy sy hiresahana ny asa ataony any atsimon’i Madagasikara. Naneho ireo asany izy ireo, indrindra ireoa any toerana hiarovana any Tsitongambarika, faritra Anosy. Nisy ireo asa-tanana vita Malagasy, ireo sarin’ny gidro ary mofo mamy ireo godro-godro, izay nangalana tahaka ny fomba nanamboaran’i Marianah azy ireny, rehefa any Ampasy, toerana iasana.
Tena faly ireo olona izay nijery ary gaga tamin’ireo fisian’ny karazana gidro maro ary tena liana izy ireo nianatra ny momba ny fiainan’ireo gidro ary ireo mponina any Madagasikara. Noho ireo fanomezana avy amin’ireo mpianatra, ireo mpiasa ary ireo mpitsidika, dia azo ireo vola nilaina hividianana ny fitaovana ho an’ireo mpiasa Malagasy ary ny fitaovana hoan’ireo sekoly any an-toerana.
Hetsika tany Azia
Japana, Japan Monkey Centre
Nandritra ny volana Oktobra iray manontolo dia nankalaza ny andro maneran-tany ny Japan Monkey Centre. Anisan’ireo hetsika tamin’izany ny « lemurs’ October Fest » ny faha 6 sy 7 Oktobra ary ny lemur BINGO ny faha 27 Oktobra ary ny dihy mirindra ny faha 28 Oktobra 2018.
Ny andro maneran-tany ho an’ny varika dia fotoana natokan’ireo mpiasa niankajo mainty sy fotsy ka naka sary miaraka izy ireo.
Ireo mpikaroka avy ao amin’ny Oniversite any Kyoto, sampam-pikarohana momba ireo Primate dia nanao famelarambelaran-kevitra ho an’ireo varika. Ny faha 6 sy faha 13 Oktobra, dia afaka nijery akaiky ireo gidro ny mpitsidika rehefa misakafo izy ireo. Ary farany, nisy ireo kilalao namboarin’ireo mpikarakara gidro sy ireo mpitsidika ao amin’ny toerana natokana ho an’i Madagasikara. Ny faha 03 oktobra ka hatramin’ny faha 5 Novambra, dia nisy ny fampirantina ireo sarin’ny varika nalain’ireo mpiasa sy ireo mpitsidika.
Ny faha 07 Oktobra ka hatramin’ny faha 04 Novambra, Tokiwa Park nikarakara hetsika maro ho an’ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany toy ireo fifaninana momba ny gidro ary ny fanomezana boky fitarahin-dalàna momba ny gidro ho an’ireo mpitsidika. Tamin’ny hetsika nitondra ny lohateny hoe « ndeha hanamaboatra sary ho an’ny gidro » mahery ny 140 ny sary voangona.
Nisy ihany koa ireo lohahevitra hafa toy ny » tokony ho tsara fanahy isika eo anatrehan’ny gidro' » « ndeha isika hiara hiaro ny gidro » ary » Miaro ny gidro aho ». Nanamboatra fitarihan-dalàna ho an’ireo mpitsidika momba ny fankalazana ny andro amnaren-tany ho a’ny gidro ny mpiasa sy mpikarakara gidro.